Hiran State - News: HS:- Kala hadalka wasiirka arimaha gudaha safarkii Hiiraan kadib
HS:- Kala hadalka wasiirka arimaha gudaha safarkii Hiiraan kadib
HS:- Inkasta oo aanu dooneyn in aanu dib ugu laabano jahwareerkii siyaasadeed ee maanta ka soo qabsaday Hiiraan wasiirka arimaha gudaha garabka Ahalusuna waljameeca hadane bal aanu bulshada u soo bandhigno sida uu afkiisa iskugu dilay ee uu u kala hadlayo.
Markaad eegto qudbadii uu u jeediyey tiro yar oo dad ah xili uu ku sugnaa magaalada Belet Weyne waxuu yiri sidan isagoo waliba amaanayo amaanka iyo guulaha ay gaareen maamulka ka arimiya Hiiraan waxuuna yiri sidan.
“Waxaa aad u amaanayaa nabad-galyada buuxda ee ka jirta magaalada, taana waxaa mahadeeda iska leh ciidamada maamulka gobollka Hiiraan iyo kuwa Itoobiya, ayuu yiri,’’
Saacad kadib waxuu idaacada VOA ka sheegay sidan xili uu aad u xanaaqsanaa marka la eego sida loogu soo dhaweeyey magaalada B/weyne oo uu is lahaa malaha dadku damiir ma leh waana laguu sacbin doonaa.
"Magaalada waxaa ka jira tuugo dhaca telefonada saldhiga Police-kana waxaa dhinac ka dayac diray dumar sidii la rabayna maahan "waa siyaasada cusub ee dadka ku fashilma soo dhaweynta Hiiraan( shiikh Shariif is next).
Wasiirka arimaha gudaha ceyda ha joojiyo Hiiraana ha yimaado iyadoo ay joogaan masuuliyiinta hada ka maqan iyo kuwa siyaasada dowlada dhexe ugu jira ayey tiri haweeney qudbadiisa ka dhageysatay caawa VOA-da aadna ula socotay maanta waxii ku dhacay wasiirka maadaama ay horey u aheyd mid ka mid ah haweenka reer Hiiraan u qaabilsan soo dhaweynta maantana gurigeeda iska joogtay.
Inkasta oo aysan dadka Soomaaliya aqoon duruqsan u laheyn wasiirka arimaha gudaha marka loo eego bulshada dalka Canada oo ah wadanka uu ka tagay wasiirka oo wax yaabaha lagu xasuusto ay ka mid yahiin inuu dalka Canada ku waalay gabar Soomaaliyeed oo caruur badan u dhashay aaqirkiina u dhimatay jiradaas, haweeneydaas oo marka loo eego dumarka ku noolaa qurbaha aheyd qof bini'aadaminimadeeda iyo daacadnimadeeda uu xad dhaaf ahaa aheydna hooyo caruurteeda kaliya korsan jirtay waxey isku buuqday...........qoraaladeena danbe ayaan kaka hadli doonaa dhacdooyin naxdin leh oo wasiirka ku saabsan.
Hadaanse dib ugu laabano safarkii maanta wasiirka waa muwaadin Soomaaliyeed xaqna u leh inuu Hiiraan booqdo sida ay u booqdaan Soomaalida kale amaba masuuliyiinta kale ee dowlada laakinse siweyn ayey ugu hoos baxday marka la eego qaabka uu ku tagay Hiiraan iyo sida ay u bahdileen siyaasiyiinta Hiiraan iyo bulshadii uu booqday xitaa waa loo quuri waayey in lagu soo dhaweeyo xarunta gobolka ee uu maamulka ku shaqeeyo oo ah goob si aad ah u qurux badan.
Marka arinta laga saaro reer magaalnimo iyo nin jecleysi fariinta uu maanta wasiirka kala tagay Hiiraan nuxurkeedu waxuu ahaa reerka aad ka dhalay ayaa 1994kii umadaan barakiciyey meel lagu heshiiyeyne ma jirto inta aadan Hiiraan imaan ka howl gal nabdeynta beelaha ay xurkuftu ka dhaxeyso waaye arintu inkasta oo ay Soomaalidu jeceshahay hadalka la qurqurxiyo taasi oo u horseeday colaada 21 jirsatay.
Dabcan reerka uu wasiirku ka soo jeedo mudo 21 sano kadib waxaa ku adag reer hebelow gogoshii Hiiraan noo dhiga qarashkiina waa madaxeena halkaasne aan ku kala baxno.
Waxaase u sahlan in ay idaacado badan oo intooda badan qiyaali ku nool sameystaan, burcad badeed malaayiin dolar ka helaan,sanadkastaba ururo cusub dhisaan dhawr sano kadibna boqolaal wiil markey kaka dhintaan mid kale sameyntiisa raadiyaan,Midka Baraxley jooga la heshiin waayo kan Cadaado jooga, kan Cadaado Joogana la heshiin waayo kan dhuuso Mareeb jooga,10% iyaga ka mid ah helaan dhaqaalo ku filan iyo shirkado waaweyn intooda kalena markey shegeeynaan ka hadlaan kaliya inta wiil ee colaadaan ugu dhimatay iyo hoogii la soo maray.
Kismaayo waxaa la heystay dhawr sano ka hor maanta waxii wiil ku dhintay rag kale ayaa isku heysta. Sh/hoose waxii magac u baxay reerka ee taariikhda galay maanta umadey ula siman yahiin oo Yugandheys ayaa laga wada amar qaataa.waxii lacag false ah la soo daabacanayey maanta waxaa la joogaa in loolanka soo socda maadaama ay reerku ka luntay kalsoonidii in qof aan beeshaasi ka soo jeedin lagu beelo ileen Soomaalidu waa is yaqaanaaye.
Hadaba maxaa loo waayey dad ka fikira mustaqbalka caruurta iyo dumarka beesha? Maxaa loo waayey 21 sano kadib shaqsiyaad reerkaan ka mid ah oo isku mashquuliya nabadeynta maadaama ay wax badan horey ugu fashilmeen? Maxaa loo waayey dad aragti fog leh oo reerka daba qabta? maxuu midkasta sharta uun ugu mashquulaa?
Ma kula tahay in aysan reerku ku jirin dad aragti fog,diinta yaqaano samaha jecel? waa ku jiraan ee ilaah ayaan dhaqaalaha ay heystaan iyo maskaxda uu ilaah siiyey uga faa'ideyneyn dhinaca wanaagsan maadaama waxii ay horey u sameeyeen oo xumaan ahaa wali qoyan yahiin qaarkood.
Xitaa hadii leys bar bar dhigo waxgaradkii ay horey beeshu ulaheyd waayo waayo iyo kuwa maanta jooga wax isku dhaw maahan waayo kuwii hore waxey ku xariiftami jireen xiniinyahooda hadii ay meel marin waayaane nabad ayey qaadan jireen si ay u ilaaliyaan jiritaankooda beelnimo,kuwa maanta jooga xiniinyahooda ma isticmaalaan kalsoonidii ayaa ka luntay taas ayaana ku qasbeysa iney sanadkasta ururo cusub sameeyaan boqolaal wiilna ku halaagaan Indhola,aan si ay kaliya u helaan xulifo aan joogto aheyn.waxaa ka suulay waxii ay umada Islaamku dhihi jireen Cisada iyo karaamada.
La soco qeybaheena danbe oo aad xasaasi u ah
· admin on June 14 2012 23:57:38 · 0 Comments · 2239 Reads ·
14,580,777 unique visits